မဟာအတုလဝေယန်ကျောင်းတော်ကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
မဟာအတုလဝေယန်ကျောင်းတော်ကြီး(အတုမရှိကျောင်းဟုလည်းခေါ်ဆို)သည် မန္တလေးမြို့တွင် တည်ရှိသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မင်းတုန်းမင်းကြီးမှ နေပြည်တော်ကို မန္တလေးမြို့သို့ရွေ့ပြီး နှစ်နှစ်အကြာ ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်းတော်ကြီးကို ရူပီးငွေ ၅ သိန်း အကုန်အကျခံပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
22°0′3″N 96°6′45″E﻿ / ﻿22.00083°N 96.11250°E﻿ / 22.00083; 96.11250ကိုဩဒိနိတ်: 22°0′3″N 96°6′45″E﻿ / ﻿22.00083°N 96.11250°E﻿ / 22.00083; 96.11250
၁၈၅၇ ခုနှစ် (၁၆၃ နှစ် အကြာက)
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့
မူလဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ကျွန်းသစ်များဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားကာ အင်္ဂတေအနုအမွမ်းများဖြင့် အပြင်မှ တန်ဆာဆင်ထားပြီး တမူထူးခြားသောလက်ရာအဖြစ် မြန်မာမူပြာသာဒ်ကို အဆင့်ဆင့် အချွန်းပုံစံဖြင့် တက်မသွားပဲ စတုရန်းပုံ လေးထောင့်စပ်စပ်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ငါးဆင့်တက်ကာ ဆောက်လုပ်ထားသည်။
၁၈၉၀ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ မီးလောင်ကျွမ်းစဉ်က ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးမီးခခဲ့ရပြီး ၃၀ ပေ (၉.၁ မီတာ) ဉာဏ်တော်အမြင့်ရှိသော မတ်ရပ်ရုပ်ပွားတော်ကြီးရောပါဝင်ခဲ့သည်။ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့စဉ်က ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွင် လှူဒါန်းထားသော ၁၉.၂ ကာရတ် (၃၂ ရတီ) ရှိသည့် စိန်တုံးကြီး(ဘိုးတော်ဘုရားအား ရခိုင်နယ်စား မဟာနော်ရထာ ဆက်သခဲ့သည့်)လည်း ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနမှ အကျဉ်းသားလုပ်သားများဖြင့် မူလအတိုင်း ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Fiala 2002.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ List of Ancient Monuments in Burma 1910.
(1910) List of Ancient Monuments in Burma (I. Mandalay Division) 1. Rangoon: Office of the Superintendent, Govt. Printing, Burma။
Fiala၊ Robert D. (2002)။ Atumashi Kyaung Temple, Mandalay, Myanmar။ Asian Historical Architecture။ 11 November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာအတုလဝေယန်ကျောင်းတော်ကြီး&oldid=491452" မှ ရယူရန်
၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။